Nahatsangana indostrian’ny dibera kakaô faharoa ny potipotika sôkôla any Cote d’Ivoire · Global Voices teny Malagasy
Cote d'Ivoire, sôkôla, orinasa mpamokatra kakaô, Afrika Andrefana, vehivavy.
Voadika ny 27 Marsa 2019 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, नेपाली, українська, Português, 日本語, Deutsch, Nederlands, Ελληνικά, English
Abidjan, Côte d'Ivoire. Vehivavy Ivoariana manempo ny ambina sôkôla hamokarana dibera kakaô. Sary nahazoana alalana avy tamin'ny mpanoratra.
Fanamarihan'ny toniandahatsoratra: Nandeha nankany Cote d'Ivoire i Jeslyn Lemke ary nianatra momba ny dingana famokarana dibera kakaô tamin'ny fampiasana potipotika sôkôla. Namoaka lahatsary fohy nanazava ny dingana fanaovana izany ho an'ny Global Voices irery ihany i Lemke .
Mivarotra dibera kakao any amin'ny mpanamboatra savony isaky ny roa na telo volana i Fatima Traoré, renim-pianakaviana dimy amby efapolo taona, mananjanaka valo. Monina any Côte d'Ivoire, ilay mpamokatra voaniho kakaô lehibe indrindra manerantany i Traoré .
Mividy voaniho kakao na paty azo avy amin'ny kakaô avy amin'ny orinasan'ny kakaô any Côte d'Ivoire ireo orinasa lehibe Eoraopeana mba hamokarana sôkôla. Nefa manana ny fampiasana eo an-toerana hanaovana menaka kakaô ihany koa ny Ivoariana dia ny famadihana ny dibera kakaô avy amin'ny potipotika sôkôla avy any amin'ireo orinasa mpamokatra sôkôla mba hanamboaran'izy ireo savony ao an-toerana antsoina hoe Kabakrou.
Ao anatin'ny volana vitsivitsy, mividy potipotika sôkôla amin'ny taonina maromaro any amin'ny orinasa mpamokatra sôkôla ao Youpogon, faritra iray any Abidjan i Traoré, mipetraka any an-drenivohitra an-tanandehiben'i Abidjan..
Sarin'i Fatima mivarotra ny diberany avy amin'ny lahatsary ôrizinaly- miaraka amin'ny fahazoan-dàlan'ny mpanoratra
Mivarotra ny ankamaroan'ny paty avy amin'ny kakaô any amin'ireo orinasa any Eoropa ny orinasa ary manary ny harona plastika izay mitahiry ny sôkôla. Mikiky ny potipotika sôkôla madinika avy ao anaty harona i Traoré rehefa tonga any an-trano ary manangona ny vongana paty goavana vita avy amin'ny sôkôla mainty manitra eo amin'ny labasy .
Manempo ny potipotika sôkôla amin'ny fampiasana afo kitay i Traoré mba hampangotrahana ny sinibe metaly maromaro misy rano ao anatn'ny hafanana tropikaly, ary mamoaka ny dibera kakaô. Nitatitra sy namoaka ity lahatsary ity i Lemke tamin'ny volana Desambra 2018 mba hanazavana ny dingana iray manontolo, tao anatin'ny fanadihadiana lalina niaraka tamin'i Traoré:
Karazana vokatra ilaina any amin'ny faritra ny dibera kakao. Mivarotra ny diberany amin'ny vehivavy i Traoré amin'ny ankapobeny izay mampiasa izany mba hanamboarana savony Kabakrou, malaza ao an-toerana ho vokatra mahasoa sy mora hanasana lamba na lovia. Mafy sy miendrika baolina ny savony Kabakrou tany am-boalohany izay matetika vita avy amin'ny menaka voanio sy sodioma afangaro amin'ny rano.
Savony Kabakrou avy amin'i Narcisse Ehui Ble CC BY-SA 4.0
Azo amidy ambongadiny na antsinjarany any amin'ny tanàndehibe maro any Côte d'Ivoire ity savony ity ary any amin'ireo firenena manodidina toa an'i Mali sy Borkina Fasô ihany koa. 200 CFA Francs (0,346 dolara) ny vidin'ny savony lehibe iray. Fomba iray mahavariana hanoloana ny savony Kabakrou vita amin'ny menaka voaniho izay mahazatra kokoa ny savony vitan'i Traoré amin'ny kakaô .